Ninivhi yekuAsiriya, Karusvingo muIsraeri | Waizviziva Here?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Myanmar Ngabere Norwegian Nzema Oromo Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Uruund Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Nei Ninivhi yekare yainzi “guta rokuteura ropa”?
Mufananidzo wevarwi vakatakura misoro yenhapwa uye vari kuiunganidza
Ninivhi ndiyo yaiva guta guru roUmambo hweAsiriya. Raiva guta rine simba, rine mizinda yemadzimambo netemberi zvakanaka chaizvo, riine migwagwa yakafara nemasvingo akakura. Muprofita wechiHebheru Nahumi akati raiva “guta rokuteura ropa.”—Nahumi 3:1.
Iyi yaiva tsanangudzo yakakodzera nokuti mifananidzo yakawanikwa pamuzinda waSaniheribhi kuNinivhi inoratidza utsinye hwaiitwa nevaAsiriya. Mumwe mufananidzo wacho unoratidza musungwa ari kudhonzwa rurimi akatsimbirirwa pasi. Zvinyorwa zveko zvinoti vasungwa vaiiswa zvokukochekera mumhino kana miromo vodhonzwa netambo dzainge dzakasungirirwa pazvokukochekera zvacho. Misoro yemadzimambo yainge yadimburwa yaisungirirwa mumitsipa yemachinda ainge atapwa kuita semanekiresi.
Nyanzvi yenyaya dzokuAssyria inonzi Archibald Henry Sayce yakataura nezveutsinye hwaiitwa nevaAsiriya kana vapamba guta ichiti: “Mirwi yemisoro yevanhu yainge yakazara munzira yemupambi; vakomana nevasikana vaipiswa vari vapenyu kana kuti kuchengetwa kuti vazourayiwa neimwe nzira yakaipisisa; varume vaifunwa ganda vari vapenyu, vachipofumadzwa, kana kudimburwa maoko netsoka uye nzeve nemhino.”
VaJudha vaiisirei karusvingo kanodzivirira pamatenga edzimba dzavo?
Mwari akarayira vaJudha kuti: “Kana ukavaka imba itsva, unofanira kugadzirawo karusvingo kanodzivirira padenga reimba yako, kuti urege kuisa mhosva yeropa paimba yako nokuti mumwe munhu angawa achibva pariri.” (Dheuteronomio 22:8) Mutemo uyu waibatsira nokuti mhuri dzevaJudha dzomunguva dzinotaurwa muBhaibheri dzaishandisa matenga edzimba kuita zvinhu zvakasiyana-siyana.
Dzimba dzakawanda dzevaIsraeri dzaiva nematenga akati sandara. Denga reimba raiva nzvimbo yakanaka yokudziyira mushana, kumbofefeterwa nemhepo kana kuti yokuitira mabasa epamba. Vanhu vaiwanzofarira kurara pamusoro pemba kana iri nguva yechirimo. (1 Samueri 9:26) Murimi aiyanika zviyo zvake pamusoro pemba asati azvikuya kana kuti aiyanika maonde nemazambiringa.—Joshua 2:6.
Denga reimba raishandiswawo pakunamata nevanamati vechokwadi nevenhema. (Nehemiya 8:16-18; Jeremiya 19:13) Muapostora Petro akaenda pamusoro pemba panguva dzemasikati kuti anyengetere. (Mabasa 10:9-16) Denga reimba rinofanira kunge raiva nzvimbo yakanakisisa yokuzororera kana raiva nemumvuri wemashizha emizambiringa kana kuti emuchindwe.
Bhuku rinonzi The Land and the Book rinoti, dzimba dzevaIsraeri dzaiva nemasitepisi kana kuti manera aienda pamusoro pemba aiva “kunze kwemba, asi muri mukati mechivanze.” Saka munhu aigona kuburuka kubva pamusoro pemba asingapindi nemumba. Izvi zvinogona kutibatsira kunzwisisa nyevero yaJesu yaiva nechokuita nokukurumidza kubuda muguta rainge rava kuda kuparadzwa yokuti: “Munhu ari pamusoro pemba ngaarege kuburuka kuzobudisa zvinhu mumba make.”—Mateu 24:17.